कति छ साउथ इन्डियन अभिनेताहरुको सम्पत्ति ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
कति छ साउथ इन्डियन अभिनेताहरुको सम्पत्ति ?
१५ मंसिर २०७३, बुधबार १०:३७
काठमाडौँ १५ मँसिर । साउथ इन्डियन अभिनेतालाई एक्सन स्टारका रूपमा चिनिने गरिन्छ । साउथका फिल्ममा एक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले एक्सन हिरोको पारिश्रमिक र कमाइ पनि निकै उच्च छ । फिल्म खेलेरै हजारौँ करोडका मालिक भएका स्टार थुप्रै छन् । भारतीय अनलाइनले एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ, जहाँ चर्चित अभिनेताहरूको सम्पत्तिबारे जानकारी छ ।
विशेषगरी तेलेगु फिल्मका अभिनेताका रूपमा चर्चित महेश बाबु अभिनयका साथै फिल्ममा लगानी पनि गर्छन् । पद्मालय स्टुडियो पनि सञ्चालन गरिरहेका महेश बाबुले सन् १९९९ को राजाकुमारुडू फिल्मबाट डेब्यु गरेका थिए । एक्सन लभर हिरोका रूपमा चिनिने महेश बलिउड अभिनेत्री नम्रता शिरोडकरका पति हुन् । यिनले अहिलेसम्म साउथमा चारचोटि उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितिसकेका छन् । यिनको कुल सम्पत्ति २१२.८ करोड छ ।एेजेन्सीको सहयाेगमा
प्रकाशित : १५ मंसिर २०७३, बुधबार १०:३७